Izizathu zentlungu esithendeni
Ukuvalelwa kwintlungu kwinqanaba, ngokukodwa kwindawo yesithende, kunokukhokelela kwimiphumo enjalo engathandekiyo njengengxaki yokuzilahla, intlungu xa uhamba kwaye usenjalo, okanye ngokubanzi ukuba unako ukuhamba ngokuzimela. Esi sifo sichaphazela inani elikhulu labantu, kodwa uninzi lwayo luyakuthinta umyinge kunye nokudala. Ziziphi izinto ezibangela intlungu kwisithende? Kukho uninzi lwawo, kwaye omnye wabo unomsebenzi omzimba kakhulu, ophumela kwii-microtraumas ezinyaweni, ukuphuhliswa kwesithende, kunye nezicathulo ezikhethiweyo.
Umthwalo owenziwe ngokweqile ngokomzimba, kunye nokusabalalisa kwawo okungahambi kakuhle, kunokukhokelela kwiimpazamo zokuhamba, ukulimala okuhlukahlukeneyo. Oku kuba sizathu sokuba isikhulu sokudakalisa sitshintshe, ngenxa yento eyenza isifo esinjalo njengesiphumo somoya. Isiphumo siphulaphulo kwisisombululo esisisigxina somlenze.
Ngentlungu entendeni yonyawo, kufuneka uqaphele iinqwelo zakho, kuba ingaba ngumthombo wazo zonke iingxaki. Xa ukhetha izicathulo, indlela efanelekileyo iyimfuneko, ekubeni ixabiso elincinci, elincinci, izikhethi ezikhethiweyo zingakhange zibangele ubuhlungu obukhulu kwindawo yesithende, kodwa kunye neentlungu emlenzeni wonke, kwaye zichaphazele impilo yomgudu.
Ubuhlungu kwisithende: ezibangela
1. Ukulimala kwi-tendon. Ezi ziquka ukuhanjiswa kweetoni kunye nokuqhawula kwabo, okuya kwenzeka xa umthwalo ungaphezulu. Ngendlela, esinye sezizathu zokubakho ukulimala okunjalo ukugqithwa kwezicathulo ezinezithende eziphezulu. Ukulimala kwamathambo kungenzeka kubantu abanobuchule obunjalo beenyawo njengeenyawo ezinyaweni, ngenxa yokuhamba ixesha elide.
2. Ukuvuvukala kwethenda ye-Achilles okanye ukunqotshwa kwethenda yecala. Eyokuqala ibangela intlungu kummandla ongasemva komlenze, ngaphezu kwesithende, okwesibini ukuya kwintlungu kwindawo ephantsi, phantsi kwesithende.
3. Ukudibanisa kwekhalenda. Ngenxa yesikhubekiso, izicubu ezinamathela ngqo kwi-calcaneus ziyavutha, kwaye xa uxinzelelo lwesithende luba lukhuni kwaye luqina. Ngokuqhelekileyo oku kukukhokelela ekuphumeni ukusuka kwindawo ephakamileyo kunye nokuhamba ngokulandelelana kwezithende.
4. Izifo. Kungenzeka ukuba imbangela yentlungu ebuhlungu kwizithende ziintlobo zonke zokusuleleka, kubandakanywa nezocansi (ngokomzekelo, i-gonorrhea, i-chlamydia kunye nezinye). Izifo ezikhunjulwayo zikhupha isifo esinjenge-arthritis echaphazelekayo, ebonakalisa iintlungu ezinzima kwizithende, kungakhathaliseki ukuba uhamba okanye uhleli. Ezi ntlungu aziyekanga nakubusuku, oku kuthetha ukuba iphupha libonakala lingenakwenzeka.
5. Isizathu sokuvuvukala kwezithende sinokuba zizifo ezifana ne-gout, i-psoriatic arthritis, isifo sikaBekhterev. Kule meko, intlungu kwimihlaba yamanzi ingabonakalisa uphawu lwesifo esihlangeneyo.
Zonke ezi zinto zingentla ziyakuchaphazela ukuba kwenzeke intlungu esithende, kodwa ubuninzi beentlungu kwiindawo ezinobumba - enye yeempawu zezo zifo eziyaziwayo njengezithende ezithengayo kunye ne-fasciitis plantar. Ixesha eliqhelekileyo lidla ngokuba yintlekele ngokwenene kubantu abachitha ixesha elide ezinyaweni zabo, kuba imbangela yokubonakala kwayo ingaba nzima ukuxinzelela kwiinyawo. Ukuqumbisa intlungu kwi-fasciitis yezityalo kunokukhethwa ngokungachanekanga, izicathulo ezingenakuzikhusela kunye nokwanda okukhawulezayo kwintsebenzo. I-fascia ye-plantar iyinxalenye ebuninzi yeethambo ezidibeneyo ezidlulayo kwinqanaba leenyawo ukusuka kwithende lesithende ukuya kumathambo e-metatarsal. Nge-fassiitis plantar, ukuvuvukala kwe-fascia kwenzeka kwindawo yokuxuba kwayo kunye ne-tubercle ehambayo, ebangela intlungu kwisithende.
Musa ukukhuphela eso sizathu sosizi kwindawo yommandla, njengoko isithende sitshatyalaliswa. Le yinkalo edla ngokudibana nabo bantu bafika oogqirha. Yintoni i-heel ekhuphayo? Ukuthetha ngolwimi olufumanekayo, isithende sithende sisithambo esiphezulu kwimizi yamacala, okubangelwa ukuvuvukala kweetoni. Kwiimeko ezininzi, isithende sithe siphume ngenxa yenyumba ye-calcium, eyayinika igama lesi sifo (ngamanye amaxesha isithende sithende sibizwa ngokuba ngumthi wesithende). Isithende sithende sithandwa kakhulu kwiiyure zasekuseni kwaye, njengoko ungacinga ukuba, uhamba ngokukhawuleza ngenxa yokugqithisa imilenze. Ukuziva okubuhlungu kakhulu kubonakala ngokuguquka okubukhali kwisimo somzimba womntu, oko kukuthi, xa umntu ephakama ngokukhawuleza esuka kwindawo ehleli kuyo. Ubuhlungu bungenakuxinwa. Ngamanye amaxesha intlungu isithende iqala ngaphandle kwesizathu esibonakalayo kwaye sinokuphelisa ngokwazo. Ngamanye amaxesha ubuhlungu buya kungena emzimbeni kwaye buhlala ixesha elide, iminyaka. Umntu unokukwazi ukuziqhelanisa kunye nokuyeka ukuwabona.
Kwenzeka ukuba intlungu kwizithende zitshintsha i-gait: umntu uzama ukudlulisela umthwalo phambi kweenyawo, ukunika ukuphumla kwangemva. Nangona kunjalo, oku akunako isisombululo kwingxaki: ukulahla intlungu, kufuneka ufunde ugqirha. Abantu abanokusola kwesi sifo kunye ne-calcanal spur bamiselwe i-radiographic of foot, engabonisa ukuba khona kwesi sifo. Isithende sithende kufuneka siphathwe.
Ngokuqhelekileyo, xa izibonakaliso zokuqala zesifo zivela, kukho umnqweno wokubhena izikratshi zabantu: ukufudumala, ukutshisa, ukusela unyango. Kufuneka ukuba uqaphele ukuba ukuzonyango okunjalo kunokubonakalisa kusebenza phantsi kweemeko ezithile, nangona kunjalo, akunakulungele ukuqhuba iimvavanyo.
Ukunyangwa kwendabuko kwesi sifo kubandakanya ikhosi ye-physiotherapy kunye nokuthabatha imithi yeentlungu. Kodwa ungalindeli ukuphucula ngokukhawuleza, kuba izifundo ze-physiotherapy zide, ngamanye amaxesha zihlala ngaphezu kweenyanga. Kukho iindlela ezininzi zanamhlanje zokuphathwa kwindlela yokutshatyalaliswa kwe-scissal-wave-wave wave, eya kuthi konke ukuphumelela kusekho ukuchasana kwamanani. Enye indlela ephumelelayo - unyango lwe-X-ray - unempembelelo. Nangona kunjalo, ukuba impumelelo ayiphumeli ngonyango lwangexesha elide, kukho enye indlela - ukungenelela kokungenelela.
Iingcebiso Zabantu: Indlela Yokususa Amatye avela kwiintso
Iintlobo kunye neendlela zokusilalisa ezisetyenzisiweyo
Iimpawu zokungabikho kwe-calcium emzimbeni kwaye yintoni ekhokelela kuyo?
Ukuphulukiswa kunye neempawu zomlingo we-ruby
Iimpawu ezisetyenziswayo zefungus yaseTibet
Intsingiselo yemilingo yeqhumiso kunye neziqhumiso
Umkhuhlane we-Swine: iimpawu, unyango kunye nokukhusela
Joke - puree kwi-cauliflower ngegalikhi kunye neparma
Kukho into engaqhelekanga kubantu abangaphuziyo
Amanyango omthonyama ekwenzeni unyango lwe-urethritis
Ukutya kwezilwanyana «Iminwe»
Ukusetyenziswa kweoli efunekayo ye-oregano
UKhenketho njengoluhlobo lomsebenzi
Ukunakekelwa kwezinyo lwezinyo
Izambatho zoboya eziphathekayo, Ubusika 2015-2016: ifoto yemodeli yefashoni kunye nezitayela zeengubo zoboya besifazane, iAntumn-Winter 2015-2016
Ukuphuhliswa kwengqondo kwabantwana 1-3 iminyaka yobomi
Iminwe yenkomo nge-sauce
Kutheni umfana ezisa intombazana kubahlobo bakhe
Indodana ka-Yana Rudkovskaya yahlushwa ngumona
Iilungiso zomntu zecandelo leenwele
Iifoto eziqhelekileyo zeFidel Castro: ukusuka kwiplanta ukuya kwi-revolutionary